AQIRISO: Wararkii ugu dambeeyay maanta ee laga qoray suuqa kala iibsiga ciyaartoyda – Gool FM
AQIRISO: Wararkii ugu dambeeyay maanta ee laga qoray suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
Byare May 7, 2016
(Europe) 07 Maajo 2016. Aqriste waxaan halkan kugu haynaa oo kugu diyaarinay warbixinnadii ugu dambeeyay maanta ee laga qoray suuqa kala iibsiga ciyaartoyda:
Saddexda xiddig ee ugu shidan Arsenal Mesut Ozil, Alexis Sanchez iyo Jack Wilshere ayaa dhammaan lagu wadaa inay qallinka ku duugaan heshiis cusub, inkastoo la sheegayo in Sanchez iyo Wenger uu soo kala dhex galay khilaaf kaddib markii laacibka la badelay kulankii dhawaa (Dailystar).
Real Madrid ayaa diyaarineysa sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd goolhayaha Chelsea Thibaut Courtois.
Blues ayaa la sheegayaa inay ku dooneyso gool ilaaliyaheeda adduun dhan 65-milyan oo bound (Daily Mail).
Manchester United ayaa sahan u dirtay inay soo dhaawadaan da’yarka Reece Oxford ee u safta xiddigaha da’dooda ka hooseysa 21-jirada ee Wast Ham, Man City iyo Arsenal ayaa sidoo kale isha ku haya 17-jirkan (The Sun.)
Alexis Shanchez ayaa la sheegayaa inuusan ku faraxsanayn nolosha Arsenal isla markaana uu ka baxay garoonka isagoo careysan kulankii ay ka adkaadeen Norwich kaddib markii badel loo taagay (Daily Telegraph).
Wakiilka xiddiga qadka dhexe ee Paul Pogba ayaa hoos u dhigay fursadda uu 23-jirka Chelsea ugu raaci karo tababarihiisii hore ee Antonio Conte kaa oo qaban doona xilka Blues kal ciyaareeka soo socda (Evening Standard).
Laacibkii hore ee Newcastle United Hatem Ben Arfa oo 29-jir ah ayaa waxaa si wayn u doonaya kooxda Barcelona (Talksport).
Ben Arfa oo iminka u safta kooxda Nice ee dalka Faransiiska ayaa waxaa sidoo kale doonaya kooxda Chelsea (Sun).
Tababarihii hore ee Liverpool Brendan Rodgers ayaa lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto Swansea City, waa kooxdii uu maareyn jiray 2010-12 (Daily Star).
Kooxda Panathinaikos ee ka dhisan Greek ayaa qorsheynaysa inay xagaaga u soo dhaqaaqdo 32-jirka qadka dhexe uga ciyaara Arsenal Mathieu Flamini (Daily Express).
Dhaliyaha da’da yar ee Man United Marcus Rashford ayaa ku dhow inuu qallinka ugu duugo Man United heshiis ku kacaya 1.3-milyan oo bound kaddib markii uu u magacaabay walaalkii ka wayn inuu la tacaalo howlihiisa ganacsi (Daily Mail).
Jamie Carragher oo soo xushay kooxda xilli ciyaareedka ee Premier League… (Arsenal, Chelsea iyo Man City oo la qadiyey) + Sawirro
Anthony Martial oo ku dhaawacmay is-kuleyntii ka horreysay kulanka kooxdiisa Man United ay la leedahay maanta Norwich City